जपानीहरु धेरै बाच्नुको रहस्य: नियमित व्यायाम, मासु होइन माछा ! - AJAMBARI
१ असार,२०७६ 110 0
संसारमा सबैभन्दा लामो आयु कुन देशका बासिन्दाको छ ? जबाफ, जापान । कसरी ? यसको जवाफ भने एक वाक्यमा टुंगिदैन ! विश्वमै सबैभन्दा लामो आयु बाँच्नेमा जापानका बासिन्दा पहिलो नम्बरमा छन् ।
जापान एक यस्तो देश हो जहाँ एक पुरुष औसत ८० बर्ष सम्म बाँच्छन् भने महिला औषत ८६ बर्षसम्म । यो औसत आयु अन्य मुलुकको भन्दा बढी हो । आखिर के कारणले उनीहरुले यति लामो समय बाँच्छन् त ?
जापानीको आयु लामो हुनुको कारण ?
६ फाल्गुन,२०७४0826
१ माघ,२०७५0199
के तपाईं आफ्नो जीवनमा कसैलाई समावेश गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ? यदि प्रश्न ‘हो’ मा...
४ जेठ,२०७५0283
१ माघ,२०७५0146
५ आश्विन,२०७५0335
३ फाल्गुन,२०७४0501
४ जेठ,२०७५0298